Sida Dugsiyada Looga codsado Dugsiyada Gaarka loo leeyahay | Boston School Finder
Waa maxay Dugsiyada Gaarka loo leeyahay?
Dugsiyada gaarka loo leeyahay waa dugsiyada dhaqaalle ahaan ay taageeraan shaqsiyaad ama ururo gaar ah, halkii gobalku ka maal galin lahaa. Gudaha Boston, waxaa ku yaala laba nooc oo dugsiyada gaarka loo leeyahay ah:
Dugsiyo Diini ah oo Gaar Loo leeyahay
Dugsiyadaan Gaarka loo leeyahay waxay ku xiran yihiin diin gaar ah. Dugsiyada ku xiran diinta ee gaarka loo leeyahay ayaa waliba bixin kara fasalo waxbarasho diimeed lagu dhigo oo qayb ka ah manhajkooda, marka lagu daro waxbarashada guud. Si kastaba ha noqotee, ardayda iyo qoysaska looma baahna inay ku dhaqmaan diintaas si ay u dhigtaan dugsiyadaan; shuruudaha diinta ayaa ku kala duwan iskuulada.
Dhagsii halkaan si aad u aragto Bogageena Dugsiyada gaarka loo lee diinta ku xiran ood ka helayso aaladeena School Finder.
Akhriso wareysiga yaga 2021 ee aanu la yeelanay hogaamiyeyaasha saddex kamid ah dugsiyada Katooligga si aad wax badan ugu ogaato Xulashooyinkaaga dugsiyada Kaatooligga.
dugsiyada madaxa banaan
Dugsiyadaan gaarka loo leeyahay ma laha wax xariir diin ah ama xariir diin gaar ah.
Halkaan dhagsii si aad u aragto Boggageena Dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Madaxa Banaan oo aad ka helayso aaladeena School Finder.
Su'aalaha Badanaa La iska Waydiiyo Dugsiyada Gaarka loo leeyahay
Dugsiyo gaar loo leeyahay lacag miyaa lagu dhigtaa?
In kasta oo inta badan dugsiyada gaarka loo leeyahay ay lacag ku dhigaan waxbarashada, Dugsiyo badan oo gaar loo leeyahay — labadaba kuwo diimo ku xiran iyo kuwo madax banaan — ayaa ardayda u fidiya kaalmo dhaqaale iyo/ama deeq waxbarasho. Dugsiyada qaar ee gaarka loo leeyahay waa kuwo lacag la’aan wax lagu dhigto ama dhiga waxbarasho qiimo jaban, oo ku salaysan dakhliga qofku haysto. Si aad u ogaato sida loo codsado kaalmada dhaqaale ama deeqda waxbarasho, fadlan si toos ah ula xariir dugsiga gaarka loo leeyahay.
Miyaan codsadaa dugsiyada gaarka loo leeyahay? Sidee ayaan kucodsan karaa?
Boston School Finder waxa uu ku talinayaa in dhammaan qoysaska doonaaya haystana waqti iyo maal si ay u dhammaystiraan hannaanka oggolaanshaha galitaanka dugsiga ay fiican tahay inay muhiimad siiyaan codsashada dugsiyada gaarka loo leeyahay. In kasta oo nidaamka codsigu adkaan karo, dugsiyada gaarka loo leeyahay waxay noqon karaan xulasho aad ugu haboon qoysas badan.
Habka codsashada DUGSIYADA gaarka loo leeyahay waxaa ku jiri kara qayb ama dhamaan waxyaabaha soosocda:
Imtixaanka gelitaanka (imtixaanka ayaa ku kala duwan hadba dugsiga)
Codsi u baahan kara qoraallo iyo/ama warqad soo jeedin ah
Ujrada dalabka (qarash dhaafka codsiga dugsiga ayaa kala duwan hadba dugsiga aad codsanayso)
Wareysiga tooska ah ee ardayga iyo/ama waalidkiisa
Codsi kaalmada lacageed, oo caadiyan la gudbiyo sanad kasta oo cunuggu dhigto dugsigaas
Gelitaanka dugsi kasta oo gaar loo leeyahay oo aad dalbato maaha mid la damaanad qaadi karo. Sababtaas awgeed, Boston School Finder waxa uu ku talinayaa in qoysasku ay iska diiwaangeliyaan ama codsadaan dookhyada dugsiyo badan, oo ay ku jiraan Boston Public Schools (iskuulada degmada BPS), Commonwealth charters , iyo Barnaamijka METCO.
Goorma ayaan codsanayaa dugsiyada gaarka loo leeyahay?
Dugsi kasto oo gaar loo leeyahay ayaa leh habka arji dirsashada oo u gaarka ah iyo waqtiga loo cayimay. Ma jiro hal codsi oo ka dhexeeya mid kasta oo ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Boston. Waa inaad dib u eegtaa qaybta ogolaanshaha ee dugsi kasta oo gaar loo leeyahay oo aad xiisaynayso aadna toos ula xidhiidho dugsiga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Xagee ka heli karaa caawinaadda codsashada dugsiyada gaarka loo leeyahay?
Waxaan kugula talineynaa inaad la xariirto dugsigaaga hadda si aad wax uga weydiiso ikhtiyaaraadka taageerada dugsiyada gaarka loo leeyahay, oo midkood laga bixiyo dugsigaaga ama ururro iskaashi la leh. Magaalada Boston waxaa ka jira ururo badan oo taageera qoysaska iyagoo ka caawinaaya inay codsadaan dugsiyada gaarka loo leeyahay. Laba ka mid ah ururadaas waxay kala yihiin:
The Steppingstone Foundation waa hay'ad samafal oo bixisa Machadka Steppingstone, oo ah barnaamij adag oo u diyaariya ardayda dadaalka badan ee kasoo jeeda bulshooyinka taariikh ahaan la midab soocay si looga aqbalo ayna gul uga gaaraan dugsiyada sare ee madaxa bannaan, Katooliga, iyo dugsiyada imtixaanka ee dawlada ee aagaga dhul waynaha Boston. . Si aad wax badan oo ku saabsan barnaamijyada ay bixiyaan bartaan u ogaato, fadlan booqo Webseetka Steppinstone Foundation.
826 Boston waa hay'ad samafal ah oo taageerta wax qorista iyo daabacaadda dhalinyarada oo ku taalla Roxbury taasoo awood u siineysa dhaqan ahaan ardayda aan aan heli jirin adeegga ku filan ee da'aha 6-18 si ay uhelaan codkooda, u sheegaan sheekadooda, ayna ku bartaan xirfadaha isgaarsiinta si ay ugu guuleystaan dugsiga iyo nolosha. Waxay bixiyaan barnaamijyada qoraalka iyo aqoon-isweydaarsiga. Si aad wax uga sii ogaato adeegyada ay baxshaan, fadlan booqo bogga webseetka 826 Boston.